16-02-2011, 02:23 PM
မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်ရဲ့ မိသားစုဝင်များအနေနဲ့ အကြောင်းအရာသစ်တစ်ခု စတင်မရေးသားခင်မှာ အရင်ဦးဆုံး မဖြစ်မနေ လေ့လာထားသင့်တဲ့ နေရာလေးနေရာရှိပါတယ် - အဲ့နေရာတွေကတော့ -
ဆိုတဲ့ နေရာတွေ ဖြစ်ပါတယ် - အဲ့ဒီ့ အကြောင်းအရာတွေမှာ မည်သည့်နေရာမှ စတင်လေ့လာရမည်နည်း။ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကို ဖတ်ရှု့ထားခြင်းအားဖြင့် မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်ရဲ့ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကို မိသားစုဝင်အသစ်များအတွက် အလွယ်တကူ နားလည်နိုင်ပြီး မိမိအနေနဲ့ ဘယ်ကဏ္ဍရဲ့ အောက်မှာ ကိုယ်သိနားလည်ချင်/သိနားလည်ထားတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အကြောင်းအရာသစ်တစ်ခု ဖော်ပြဆွေးနွေးနိုင်မလဲဆိုတာ အလွယ်တကူ ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင် အကြောင်းအရာသစ်တစ်ခု ရေးသားရာတွင် မည်သည့်အချက်များ လိုက်နာရမည်နည်း။ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကို ဖတ်ရှု့ထားခြင်းအားဖြင့် အကြောင်းအရာသစ်တစ်ခု မရေးသားခင်မှာ ဘာတွေ သိနားလည်ထားဖို့လိုသလဲ ဆိုတာ နားလည်ပါလိမ့်မယ် - မျှဝေသူတစ်ယောက် သိရှိထားရမည့် အချက်များမှာ အဘယ်နည်း။ နဲ့ မျှဝေသူများတွင် ပြည့်စုံရမည့် အချက်များမှာ အဘယ်နည်း။ ခေါင်းစဉ်တွေကို ဖတ်ရှု့ထားခြင်းအားဖြင့် မျှဝေဆွေးနွေးသူ တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေ သိနားလည်ထားဖို့ လိုမလဲ၊ မျှဝေသူတစ်ယောက် ပြည့်စုံသင့်တဲ့ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် အချက်တွေက ဘာတွေလဲ၊ ပြည့်ဝမှန်ကန်တဲ့ ဆွေးနွေးချက် တစ်ခုဖြစ်အောင် ဘယ်အချက်တွေပေါ်မှာ အခြေခံရမလဲ ဆိုတာ နားလည်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
အားလုံးကို သိရှိနားလည်ခဲ့ပြီ ဆိုရင်တော့ မိမိရေးသားလိုတဲ့ Thread အသစ်တစ်ခု စတင်ရေးသားဖို့ အချိန်တန်ပါပြီ - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်စာမျက်နှာ ကို သွားပြီး ကဏ္ဍအသီးသီးအောက်က မိမိပါဝင်ရေးသားမျှဝေလိုတဲ့ ဖိုရမ်ခွဲ အသီးသီးအောက်ကို ဝင်ရောက်လိုက်ပါ - ဥပမာ မိသားစုဝင်အသစ်များ တစ်ခုခု အကူအညီတောင်းချင်ကြပြီ ဆိုပါစို့ - ဒီလိုဆို အကူအညီယူရင်းအကြံပြုကြမယ် ဆိုတဲ့ ကဏ္ဍကြီးရဲ့အာက်က ဖိုရမ်နဲ့သက်ဆိုင်နေမယ့် အခက်အခဲများကို အကူအညီတောင်းခံနိုင်ဖို့ ဖိုရမ်မှအခက်အခဲများ ဆိုတဲ့ကဏ္ဍခွဲအောက်ကို ဖြစ်စေ - ကွန်ပြူတာအခက်အခဲ အသီးသီးကို အကူအညီတောင်းခံနိုင်ဖို့ အတွက် အခြားအခက်အခဲများ ဆိုတဲ့ ကဏ္ဍခွဲအောက်ကို ဖြစ်စေ ဝင်လိုက်ပါ - အဲ့လို ခေါင်းစဉ်ခွဲတွေရဲ့ အောက်ကို ဝင်လိုက်တာနဲ့ အကြောင်းအရာ အားလုံးရဲ့ ဘယ်ဘက်ထိပ်ဆုံးမှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း New Thread ဆိုတာ တွေ့ပါလိမ့်မယ် -
အဲတာလေးကို Click ပေးပြီး မိမိရေးသားမိတ်ဆက်လိုတဲ့ အကြောင်းအရာသစ်တစ်ခုကို စတင်ရေးသားနိုင်ပါပြီ - အကြောင်းအရာသစ်ကို ဒီနေရာတစ်ခုတည်းက ရေးသားနိုင်တာ မဟုတ်ပါဘူး - ဥပမာ အကူအညီယူရင်းအကြံပြုကြမယ် ဆိုတဲ့ ကဏ္ဍကြီးရဲ့အာက်က ဖိုရမ်နဲ့သက်ဆိုင်နေမယ့် အခက်အခဲများကို အကူအညီတောင်းခံနိုင်ဖို့ ဖိုရမ်မှအခက်အခဲများ ဆိုတဲ့ကဏ္ဍခွဲအောက်ကို ဖြစ်စေ - ကွန်ပြူတာအခက်အခဲ အသီးသီးကို အကူအညီတောင်းခံနိုင်ဖို့ အတွက် အခြားအခက်အခဲများ ဆိုတဲ့ ကဏ္ဍခွဲအောက်ကို ဖြစ်စေ ဝင်လိုက်တာနဲ့ အကြောင်းအရာ အားလုံးရဲ့ ဘယ်ဘက်အောက်ဆုံးနားက အောက်ဖော်ပြပါ New Thread ဆိုတဲ့ button ကို Click ပေးပြီးတော့လည်း အကြောင်းအရာသစ်တစ်ခုကို စတင်ရေးသားနိုင်ပါတယ် -
တစ်ခြားကဏ္ဍခွဲတွေမှာလည်း ဒီသဘောပါပဲ -
!!မှတ်ချက် >> တစ်ချို့ ကဏ္ဍခွဲတွေမှာ ( ဥပမာ - မိသားစုဝင်တို့အတွက် ဆိုတဲ့ ကဏ္ဍကြီးအောက်က ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ် အရင်ဦးဆုံး မိတ်ဆက်ပေးမယ့် ကျွန်တော်သည် ဆိုတဲ့ ကဏ္ဍခွဲနဲ့ ကျွန်မသည် ဆိုတဲ့ ကဏ္ဍခွဲတွေမှာဆိုရင် အခြေခံသဘောတရား ဖော်ပြချက် တူညီမယ့် အကြောင်းအရာတွေ ဆင့်ကဲဆင့်ကဲ ရေးသားနေမှာမျိုးဖြစ်လို့ Thread မဖောင်းပွရအောင် မိတ်ဆက်ပါရစေ ဆိုတဲ့ Thread တစ်ခုတည်းအောက်မှာ Reply လုပ်ပြီး ရေးသားခိုင်းထားတာမျိုး ရှိပါတယ် - လုပ်ဆောင်ပုံချင်း တူတူပါပဲ )
မိသားစုဝင်များ ပျော်ရွှင်စွာ ရေးသားမျှဝေနိုင်ကြပါစေ -
Last edited by KznT; 17-02-2011 at 01:51 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 86 ဦးတို့မှ KznT အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, ကိုကိုပိုင်, ကိုခိုင်ကြီး, ကိုဂျိန်း, ကိုပျင်း, ကိုဦး, ချင်းလေး, ချစ်သမီး, ချမ်းမင်း၈၁, ချမ်းမြေ့ ကျော်, ငါပီ၇ည်, စစ်တွေသားချေ, စိုးလင်းဇော်, စွမ်းကမ္ဘာ, ဆန်းမောင်, ဆလိုင်းသန့်ဇော်ဝင်း, တာတာ, တီဘွား, ဒီဝန်းအိမ်, ဒဿဂီရိ, နီထွန်းဦး, ဖိုးတာတေ, မီးအိမ်ငယ်, မိုးတိန်, ယုယု, ယွန်းယွန်း, ရဲရဲလေး, လွမ်းဧကရီ, ဝင်းအောင်, သင်းသင်းဟန်, သန့်ဇင်ဌေး, သားညို, ဟိန်းသက်အောင်, ဦးလေးကြီး, ခေါက်ရောင်းသား, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, ဇော်ရဲပိုင်, နေမင်းမောင်, မောင်မဲညို, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, မောင်အောင်ဟိန်းအေး, မွေဖု, ရွှေနေလ, အောင်လံလေး, ငြိမ်းချမ်း, မြင့်မိုရ်, မြန်အောင်သား, amaung344, apri, arkaraung, Aye Chan Thu, AZM, bonge, g00gle, goldstar, Hlwamkoko, Htet Arcar, htoo war, htun30, kaung kin lu, ko lin, kyaukphyu, kyawminkhoung, kyawsoemoe, lu soe, mgwinhlaing, minthike, minthumon, moe san dar, nyeinsaeya86, Nyi Nyi Zaw, phoetharlay, PyaitSone, sAnDViper, sawjonnie, sinpauk, thamadi, thetzin, tu tu, warior, Ye Aung, yelinoo, yemyatlin, zin min aung, zo
အခြေခံ Text design များ ပြောင်းလဲခြင်း
မြန်မာမိသားစုဖိုရမ် မိသားစုဝင်များ အနေဖြင့် ပြန်စာရေးသားရာတွင် ဖြစ်စေ - အကြောင်းအရာ သစ်တစ်ခု စတင်ရေးသားရာတွင် ဖြစ်စေ - ပြောင်းလဲ အသုံးပြုနိုင်မည့် စာသား ပြင်ဆင်မှု ပုံစံများမှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
စာသားနှင့် Code များအား အတူတကွ Select လုပ်၍ ဖော်ပြပါ Button အားနှိပ်ပါ။
စာသားအား Format လုပ်ထားသည့် အရာမှန်သမျှ ပယ်ဖျက်ရန် ဖြစ်သည်။
စာသား၏ Fonts အမျိုးအစား အား ပြောင်းလဲ ရန် ဖြစ်သည်။ စာသားအား Select လုပ်၍ ဖော်ပြပါ နေရာမှ ရွေးချယ်ပါ။
စာသား၏ အရွယ်အစားအား ပြောင်းလဲရန် ဖြစ်သည်။ စာသားအား Select လုပ်၍ ဖော်ပြပါနေရာမှ ရွေးချယ်ပါ။
စာသားအား Bold တင်ရန် ဖြစ်သည်။ စာသားအား Select လုပ်၍ ဖော်ပြပါ Button အားနှိပ်ပါ။
စာသားအား Italic ပုံစံပြောင်းရန် ဖြစ်သည်။ စာသားအား Select လုပ်၍ ဖော်ပြပါ Button အားနှိပ်ပါ။
စာသားအား Underline တားရန် ဖြစ်သည်။ စာသားအား Select လုပ်၍ ဖော်ပြပါ Button အားနှိပ်ပါ။
စာသားအား ဘယ်ကပ်ရေးရန် ဖြစ်သည်။ စာသားအား Select လုပ်၍ ဖော်ပြပါ Button အားနှိပ်ပါ။
စာသားအား အလယ်ညှိရေးရန် ဖြစ်သည်။ စာသားအား Select လုပ်၍ ဖော်ပြပါ Button အားနှိပ်ပါ။
စာသားအား ညာကပ်ရေးရန် ဖြစ်သည်။ စာသားအား Select လုပ်၍ ဖော်ပြပါ Button အားနှိပ်ပါ။
စာသားအား အမှတ်စဉ်ဖြင့် ဖော်ပြရန် ဖြစ်သည်။ စာသားအား Select လုပ်၍ ဖော်ပြပါ Button အားနှိပ်ပါ။
စာသားအား အစီအစဉ်ဖြင့် ဖော်ပြရန် ဖြစ်သည်။ စာသားအား Select လုပ်၍ ဖော်ပြပါ Button အားနှိပ်ပါ။
စာသားအား အရောင်ဖြင့် ဖော်ပြရန် ဖြစ်သည်။ စာသားအား Select လုပ်၍ ဖော်ပြပါနေရာမှ နှစ်သက်ရာ အရောင်အား ရွေးချယ်ပါ။
မြန်မာမိသားစု :1::4: မြန်မာမိသားစု
စာသားတွင်း၌ ဖိုးပြုံးချို လေးများ ထည့်သွင်း ဖော်ပြရန် ဖြစ်သည်။ စာသားအား Select လုပ်၍ ဖော်ပြပါ နေရာမှ နှစ်သက်ရာ ဖိုးပြုံးချို လေးများအား ရွေးချယ်ပါ။
Server ကန့်သတ်ချက် ကြောင့် အသုံးပြု၍ မရ သေးပါ။
လက်ရှိ လုပ်ဆောင် နေသော လုပ်ငန်း များအား မလုပ်ဆောင် လိုတော့ပဲ မူလ အခြေအနေ သို့ ပြန်သွားရန် အသုံးပြုသည်။
ပြင်ဆင်ထား ချက်များအား မလုပ် ဆောင်ချင်တော့ဟု ဆုံးဖြတ် ပြီးသည့် ( Undo ) အခြေအနေမှ နေ၍ ပြန်လည် လုပ်ဆောင် လိုသည့် အခြေအနေ မျိုးတွင် ( Redo ) အား အသုံးပြုသည်။
လက်ရှိ ရေးသားနေသော Text Area ၏ အရွယ်အစားအား ချုံ့ရန် / ချဲ့ရန် ဖြစ်သည်။
စာပိုဒ် ခွဲ၍ ရေးသားလိုသည့် အခါ / အခြားသော အကြောင်းအရာ များနှင့် ကွဲပြားစွာ ဖော်ပြလိုသည့် အခါတွင် အသုံးပြုသည်။ ကွဲပြားစေချင်သော စာသားအား Select လုပ်၍ ဖော်ပြပါ Button အား နှိပ်ပါ။
ယခင် စာပိုဒ် ခွဲ၍ ရေးသား ထားသော အရာများအား ပြန်လည် ပေါင်းစည်း လိုလျှင်ဖြစ်စေ - အခြားသော အကြောင်းအရာ များနှင့် ကွဲပြားနေမှု များအား ပြန်လည် ဆက်စပ် လိုလျှင် ဖြစ်စေ အသုံးပြုသည်။
တစ်နေရာမှ အခြား တစ်နေရာသို့ စာသားနှင့် Links များ အတူတကွ ချိတ်ဆက် ဖော်ပြလိုလျှင် အသုံးပြုသည်။
ယခင် ချိတ်ဆက်ထားသော Links များအား ပြန်လည် ပယ်ဖျက်လိုလျှင် အသုံးပြု သည်။
[email="pututu@gmail.com"] KznT [/email] KznT
မိမိ၏ Email / တစ်စုံ တစ်ယောက်၏ Email အား ဖော်ပြ လိုလျှင် အသုံးပြု သည်။
[IMG] http://goo.gl/wm6DS [/IMG]
အခြားသူ တစ်ယောက် ရေးသားထား ပြီးသော အကြောင်းအရာအား ရည်ညွှန်းရာတွင် ဖြစ်စေ ၊ စာသားအား ထင်ရှားစွာ ဖော်ပြလိုလျှင် ဖြစ်စေ အသုံးပြုသည်။
[code] tag နှင့် ရေးသား ခြင်းဖြင့် စာသားများအား သတ်မှတ်ထားပြီး ဖြစ်သော အကျယ်နှင့် စုစည်းကျစ်လျစ်သော ဖော်ပြချက်အား ရရှိစေသည်။
HTML code များ ထင်ရှားစွာ ဖော်ပြနိုင်စေရန် ဖြစ်သည်။
Youtube clips များ ထည့်သွင်း ဖော်ပြနိုင်စေရန် ဖြစ်သည်။
ရေးသားချက်၌ Tables များ ထည့်သွင်း ဖော်ပြနိုင်စေရန် ဖြစ်သည်။
ဤနေရာတွင် လေ့လာရန် လတ်တလော အသုံး မရှိသေး။
ရေးသားချက်၌ MF Video ထည့်သွင်း ဖော်ပြနိုင်စေရန် ဖြစ်သည်။
ရေးသားချက်၌ Flash များ ထည့်သွင်း ဖော်ပြနိုင်စေရန် ဖြစ်သည်။
ရေးသားချက်၌ PDF များ ထည့်သွင်း ဖော်ပြနိုင်စေရန် ဖြစ်သည်။
စာသားများ ဘေးဘယ်ညာ ညီညာ လှပစွာ ရေးသား နိုင်စေရန် ဖြစ်သည်။
Last edited by KznT; 18-02-2011 at 09:23 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 78 ဦးတို့မှ KznT အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, ကိုခိုင်ကြီး, ကိုပျင်း, ကိုဦး, ချင်းလေး, ချစ်သမီး, ချမ်းမြေ့ ကျော်, စစ်တွေသားချေ, စွမ်းကမ္ဘာ, ဆန်းမောင်, တီဘွား, ဒီဝန်းအိမ်, ဒဿဂီရိ, ဖိုးတာတေ, မီးအိမ်ငယ်, မိုးတိန်, ယွန်းယွန်း, ရုပ်ဆိုး, ရဲရဲလေး, ဝင်းအောင်, သင်းသင်းဟန်, သန့်ဇင်ဌေး, ဟန်မိုးလွင်, ဟိန်းသက်အောင်, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, ဦးလေးကြီး, ခေါက်ရောင်းသား, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, ဇော်ရဲပိုင်, နေမင်းမောင်, မေထူးမောင်, မေဦးမွန်, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, မောင်အောင်ဟိန်းအေး, အောင်ဗလ, ငြိမ်းချမ်း, မြင့်မိုရ်, ကြယ်စင်စိုး, amaung344, AZM, azp09, bagothar85, blackNwhite, bonge, Emc Arkar, g00gle, goldstar, Hlwamkoko, Htet Arcar, htoo war, htun30, kaung kin lu, ko lin, konaing2011, kyaukphyu, kyawminkhoung, KZaw, lu soe, Mg kyaw problemboy, mgwinhlaing, minthike, minthumon, moe san dar, Myo Min Zaw, phoetharlay, PyaitSone, sAnDViper, sawjonnie, thetzin, thura.it, tu tu, yawnathan, Ye Aung, yelinoo, yemyatlin, zin min aung, zo
13-03-2011, 04:51 AM
ကိုယ်ရေးဖိုင်မှာ ရှိတဲ့ ပုံငယ်ဟာ သရုပ်ပြပုံငယ် ( Avatar ) နဲ့ မတူပါဘူး - Avatar ဆိုတာ ကိုယ့် username အောက်မှာရှိနေမယ့် ပုံကို ခေါ်ဆိုပြီး ကိုယ်ရေးဖိုင်မှာ ရှိမယ့် ပုံငယ်ဆိုတာ ကိုယ့် Profile မှာ ရှိနေမယ့် ပုံဖြစ်ပါတယ်။ မြင်သာအောင် အောက်ဖော်ပြပါ ပုံကို ကြည့်ပါ - ( ကျွန်တော်က နှစ်မျိုးလုံးကို ပုံတစ်မျိုးတည်း တင်ထားလို့ ဒီနေရာမှာ တူနေပါတယ် )
ကိုယ်ရေးဖိုင်မှာ ရှိတဲ့ ပုံငယ်ဟာ သရုပ်ပြပုံငယ် ( Avatar ) နဲ့ မတူဘူးဆိုပေမယ့် ပြင်ဆင်ရမယ့် လုပ်ငန်းစဉ်တွေက သရုပ်ပြပုံငယ် ( Avatar ) ပြင်ဆင်ပုံအတိုင်း တော်တော်များများ ဆင်တူပါတယ်။ ကိုယ်ရေးဖိုင်မှာ ရှိတဲ့ ပုံငယ်ကို ပြင်ဆင်ဖို့ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ပြင်ဆင်ရန် >> ကိုယ်ရေးဖိုင်ရှိပုံငယ်ပြင်ရန် ကိုသွားပါ -
ကိုယ်ရေးဖိုင်ရှိပုံငယ်ပြင်ရန် ဆိုတဲ့ စာမျက်နှာကို ရောက်ရင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း လတ်တလော အနေအထားမှာ ရှိနေတဲ့ Profile pic ကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ်ရေးဖိုင်မှာ ရှိတဲ့ ပုံငယ်နဲ့ သရုပ်ပြပုံငယ် ( Avatar ) ရဲ့ ကွာခြားချက်ကို နားလည်ခဲ့ပြီး ဒီအဆင့်ထိ ရောက်လာခဲ့ပြီ ဆိုရင် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမယ့် အဆင့်တွေကို သရုပ်ပြပုံငယ် ( Avatar ) မည်သို့ ပြောင်းလဲရမည်နည်း။ ဆိုတဲ့ ရေးသားချက်ထဲက အဆင့် ၃ - ၁၁ ထိ ဖော်ပြချက်အတိုင်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင် ပေးသွားပါ - ဒါဆိုရင် ကိုယ်ထားချင် ( ဝါ ) ပြောင်းလဲချင်တဲ့ Profile pic ကို ပြောင်းလဲပြီးသား ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
Last edited by KznT; 13-03-2011 at 04:54 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 64 ဦးတို့မှ KznT အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, ကိုဂျိန်း, ကိုစံငြိမ်း, ခင်မျိုးစစ်, ချင်းလေး, ချစ်သမီး, စစ်တွေသားချေ, စွမ်းကမ္ဘာ, စွမ်းထက်မောင်, ဒီဝန်းအိမ်, ဒဿဂီရိ, ဖိုးတာတေ, မိုးတိန်, ယုယု, ယွန်းယွန်း, ဝင်းအောင်, သင်းသင်းဟန်, သန့်ဇင်ဌေး, ဟန်မိုးလွင်, ဟိန်းသက်အောင်, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, အကြင်နာမဲ့, ခေါက်ရောင်းသား, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, ဇော်ရဲပိုင်, ဇေကြီး, နေမင်းမောင်, မေဦးမွန်, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, မောင်အောင်ဟိန်းအေး, ငြိမ်းချမ်း, မြင့်မိုရ်, apri, arkaraung, Aung Aung, bagothar85, bonge, g00gle, goldstar, Hlwamkoko, htun30, kaung kin lu, ko lin, kyawminkhoung, KZaw, lu soe, Ma Ei, mgwinhlaing, minlatt, minthike, minthumon, moe san dar, phoetharlay, PyaitSone, sweetylemon7, thetzin, thura.it, tu tu, yawnathan, Ye Aung, yelinoo, zin min aung, zo
24-03-2011, 03:32 PM
ဒီနေ့ မြန်မာမိသားစုဖိုရမ် အသုံးပြုနည်းမှာ ရေးဖို့ ကျန်နေတဲ့ အပိုင်းတွေထဲက ပြန်စာရေးသားခြင်း အကြောင်း ရှင်းပြချင်ပါတယ် - မိသားစုဝင် တော်တော်များများ ဒီအကြောင်းအရာကို သိပြီးသား ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ဖိုရမ်ဝင်လေ့ဝင်ထ မရှိတဲ့ မိသားစုဝင်တစ်ချို့က Post Reply နဲ့ New Thread ဆိုတာရဲ့ ကွာခြားချက်ကို မသိကြသေးပါဘူး -
သက်ဆိုင်ရာ ဖိုရမ်ခွဲ အသီးသီးအောက်ကို ဝင်လိုက်ရင် အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း တွေ့ရမယ့် New Thread ဆိုတာ ဒီဖိုရမ်ခွဲထဲမှာ ကိုယ့်အနေနဲ့ ဘယ်သူမှ မဆွေးနွေးရသေးတဲ့ ခေါင်းစဉ်အသစ်စက်စက်တစ်ခုကို ကိုယ်ကစပြီး ဆွေးနွေးချင်တဲ့ အခါမှာ အသုံးပြုပါတယ် - တစ်ဖက်လှည့်နဲ့ ပြောရရင် Thread Creator ပေါ့ - ဖိုရမ်မှာ New Thread ဖန်တီးတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အများကြီး ကန့်သတ်ချက် မရှိပေမယ့် လိုက်နာသင့်တဲ့ အချက်တစ်ချို့ ရှိပါတယ် - အဲ့တာက New Thread တစ်ခုကို မဖန်တီးခင်မှာ -
ကိုယ်ဖန်တီးချင်တဲ့ Thread နဲ့ အကြောင်းအရာတူ - ခေါင်းစဉ်လွဲ / အကြောင်းအရာတူ - ခေါင်းစဉ်တူ Thread ဟောင်းတစ်ခု ရှိနှင့်ပြီးသလား ဖြစ်မဖြစ် စစ်ဆေးကြည့်ပါ ( ဥပမာ ကျွန်တော်တို့က Prince Of Persia ဆိုတဲ့ ဂိမ်းအကြောင်း ဆွေးနွေးချင်တယ် ဆိုပါစို့ - ဒီလိုဆို ကွန်ပျူတာဂိမ်းတွေအကြောင်း ဆိုတဲ့ ကဏ္ဍအောက်ကို ဝင်ပြီး ကိုယ်ရေးချင်တဲ့ Prince Of Persia ဂိမ်းအကြောင်း ဆွေးနွေးထားတဲ့ Thread တစ်ခု အရင်ရှိနှင့်ပြီးသား ဖြစ်မဖြစ် တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါ - အဲ့လို ရှာကြည့်လိုက်ရင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ကိုယ်ဆွေးနွေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့ တိုက်ဆိုင်မယ့် ဆွေးနွေးချက်ဖြစ်ဖြစ် ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ဖြစ် ဆင်တူတဲ့ အကြောင်းအရာမျိုး တွေ့ကောင်းတွေ့ပါလိမ့်မယ် )
Thread အဟောင်း ရှိမရှိ နောက်ထပ် အလွယ်ကူဆုံး ရှာဖွေနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတစ်ခုက Forum ရဲ့ Search function ကို သုံးတဲ့နည်းပါ - ဥပမာ Prince Of Persia ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ Thread အဟောင်းတစ်ခု ရှိမရှိ ရှာဖွေချင်တယ်ဆိုရင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ရှာကြမယ်ကနေ တစ်ဆင့် ရှာဖွေကြည့်နိုင်ပါတယ်။
အဲ့လိုရှာဖွေလိုက်လို့ ရှိနှင့်ပြီးသား Thread အဟောင်းတစ်ခု တွေ့ခဲ့မယ် ဆိုရင် အဲ့ဒီ Thread အဟောင်းအောက်ကို ဝင်ရောက်ပြီး New Thread အစား Post Reply အနေနဲ့ ဆွေးနွေးပေးခြင်းအားဖြင့် ဖိုရမ်တိုင်းမှာ အဖြစ်များနေတဲ့ Threads ဖောင်းပွမှု ပြဿနာကို မိမိအနေနဲ့ ကူညီထိန်းသိမ်းပြီးသား ဖြစ်သွားပါတယ် - လေ့လာမယ့် သူတွေ အနေနဲ့လည်း အကြောင်းအရာ တစ်ခုတည်းကို နှစ်နေရာခွဲပြီး သွားနေစရာမလိုတော့ပဲ နေရာတစ်ခုတည်းအောက်မှာ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဖတ်ရှုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
တကယ်လို့ အဲ့လို သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍ အသီးသီးအောက်မှာ Thread အသစ်မရေးသားခင် နည်းမျိုးစုံနဲ့ ရှာဖွေကြည့်ပေမယ့် အကြောင်းအရာတူ - ခေါင်းစဉ်လွဲ / အကြောင်းအရာတူ - ခေါင်းစဉ်တူ Thread ဟောင်းတစ်ခု ရှာလို့ မတွေ့ခဲ့ဘူးဆိုရင် ကိုယ်ရေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာသစ်ကို New Thread ထုတ်ပြီး ရေးသာရေးချလိုက်ပါ - ဘာကိုမှ စိုးရိမ်ဖို့ မလိုပါဘူး - စတင်အသုံးပြုခါစ မိသားစုဝင်တွေအနေနဲ့ ဖိုရမ် အသုံးပြုနည်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အကျွမ်းဝင်မှု မရှိနိုင်တာ - ဘယ်နားမှာ ဘယ် Thread ရှိနှင့်ပြီးသားကို မသိနိုင်တာကို ဖိုရမ်ထိန်းသိမ်းသူများ သဘောပေါက်ကြပါတယ် - တကယ်လို့ သင့်တော်မယ့် Thread အဟောင်း တစ်ခုတွေ့ခဲ့ရင် အဲ့ဒီကိုယ်ရေးထားတဲ့ Thread အသစ်ကိုပဲ ဖိုရမ်ထိန်းသိမ်းသူများက သင့်တော်တဲ့ Thread အဟောင်းအောက်ကို ရောက်ရှိအောင် ရွှေ့ပြောင်းပေးသွားပါလိမ့်မယ်။
Post Reply ဆိုတာကတော့ တစ်စုံတစ်ယောက် အစပျိုးရေးသားထားပြီးသား အကြောင်းအရာအောက်မှာ ဒီ Thread နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာကိုပဲ ကိုယ့်အတွေး / ကိုယ့်အမြင် / ကိုယ့်ဗဟုသုတ နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဆက်စပ်ဆွေးနွေးဖို့ ရေးသားတာကို ခေါ်ပါတယ် - ဒီလို Post Reply ရေးသားဖို့ ဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာ ဖိုရမ်ခွဲ အသီးသီးအောက်ကိုတင် မကပဲ - ဆွေးနွေးချက်အသီးသီးအောက်ကိုပါ ထပ်မံ ဝင်ရောက်ဖို့ လိုမှာ ဖြစ်ပါတယ် - ရေးသားလိုတဲ့ အကြောင်းအရာ ခေါင်းစဉ်အောက်ကို ရောက်ပြီဆိုရင် အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း Post Reply Button ကို နှိပ်ပြီး အကြောင်းအရာ သစ်တစ်ခု စတင်ရေးသား နိုင်ပါပြီ - Post Reply နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဒီနေရာမှာ သိထားသင့်တာလေး တစ်ချို့ ပြောပေးပါဦးမယ် -
Post Reply နှင့် Quick Reply ၏ ကွာခြားချက်
ကျွန်တော်တို့ ဖိုရမ်တင်မက တစ်ခြား မြန်မာဖိုရမ်အားလုံးလိုလိုမှာ Thread တစ်ခုကို Reply ပြန်ဖို့ အတွက် စနစ်နှစ်မျိုး ထားထားပေးပါတယ် - အဲ့တာကတော့ Post Reply နဲ့ Quick Reply ပါ -
Thread တစ်ခုရဲ့ ထိပ်ဆုံး ( ဒါမှမဟုတ် ) အောက်ဆုံးမှာ ရှိတဲ့ Post Reply ဆိုတာ သက်ဆိုင်ရာ Thread နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ကိုယ့်အတွေး / ကိုယ့်အမြင် / ကိုယ့် ယူဆချက်တွေကို တစ်ခန်းတစ်နားနဲ့ အကျယ်ချဲ့ ပြန်ကြားရေးသားဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ့ Post Reply ကို သုံးမယ် ဆိုရင် ပုံမှန် Text editors တွေ သုံးလို့ ရမှာ ဖြစ်သလို - တစ်ခြား ပေါင်းတာထည့်တာလေးတွေလည်း အများအပြား လုပ်ဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် -
တကယ်လို့ အမြန်ပြန်ပို့စာ ဆိုတဲ့ နေရာကနေ ရေးသားမယ် ဆိုရင်တော့ Text editors တွေ စုံစုံလင်လင် သုံးရမှာ မဟုတ်ပါဘူး - ဒီလိုနေရာက အချိန်မရတော့တဲ့ အခြေအနေ - ကြီးကြီးမားမား ဆွေးနွေးချက်မျိုး မဟုတ်ပဲ လိုတိုရှင်း ပြန်ကြားချက်တွေ ရေးသားဖို့ နေရာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ Quick Reply ကနေတဆင့် လိုတိုရှင်း ရေးနေရာကနေ ကိုယ်ရေးရမယ့် အကြောင်းအရာက များလာလို့ Text editors တွေ စုံစုံလင်လင်ရှိတဲ့ Post Reply ကိုပြန်ပြောင်းချင်တယ် ဆိုရင်လည်း အထက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အတိုင်း အကျယ်တဝင့်ရေးမည် ဆိုတဲ့ နေရာကနေ တဆင့် ပြောင်းလဲ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ပြန်စာရေးသားခြင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ထိထိရောက်ရောက် အသုံးပြုနိုင်ကြပါစေ။
Last edited by KznT; 24-03-2011 at 04:05 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 71 ဦးတို့မှ KznT အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, ကိုခိုင်ကြီး, ကိုဂျိန်း, ကိုစံငြိမ်း, ချင်းလေး, ချစ်သမီး, ချမ်းမင်း၈၁, စွမ်းကမ္ဘာ, စွမ်းထက်မောင်, ဆိုင်နင်ဂျူး, တာတာ, တီဘွား, ဒဿဂီရိ, နီထွန်းဦး, မိုးတိန်, မိုးလွင်, ယုယု, ရဲရဲလေး, ဝင်းအောင်, သင်းသင်းဟန်, သန့်ဇင်ဌေး, သရက်သီး, ဟိန်းသက်အောင်, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, ဦးလေးကြီး, ခေါက်ရောင်းသား, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, ဇော်ရဲပိုင်, နေမင်းမောင်, မေဦးမွန်, မောင်မဲညို, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, မောင်အောင်ဟိန်းအေး, ငြိမ်းချမ်း, မြင့်မိုရ်, amaung344, apri, AZM, bagothar85, bonge, futurestar, g00gle, gandamar, goldstar, Hlwamkoko, htun30, kaung kin lu, komyatthu, lu soe, ma mee, mgwinhlaing, MilkyWay, minlatt, minthike, minthumon, mjkomg012@gmail.com, pannuko, papaya, phoetharlay, PyaitSone, sawehlor, sweetylemon7, thetzin, thura.it, tu tu, Ye Aung, yelinoo, yemyatlin, zin min aung, zo
Reputation နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မိသားစုဝင်တော်တော်များများ ခုချိန်ထိ သဘောက်မပေါက်ကြသေးသလို - ဒီ Feature ကို သိပ်လည်း သုံးတာ မတွေ့ရသေးပါဘူး - Reputation ဆိုတာ ဖိုရမ်မှာ ကျွန်တော်တို့ ပို့စ်တွေ ရေးရတယ် - Threads အသစ်တွေ တင်ကြတယ် - ဒါမျိုးက မိသားစုဝင်တိုင်း လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိတယ် - မိသားစုဝင်ဖြစ်တာနဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်လည်း ပေးထားတယ် - ဒါပေမယ့် ပို့စ်တွေ ရေးတိုင်း - Threads အသစ်တွေ တင်တိုင်း အများအကျိုးပြုတဲ့ ပို့စ်တွေလား - Threads တွေလားဆိုတော့ မဟုတ်ဘူး - တစ်ချို့က Credit မပေးပဲ သူများဖိုရမ်တွေ ဘလော့တွေကနေပို့စ်တွေ ကူးတင်တာ ရှိတယ် - တစ်ချို့က တစ်ကြောင်းစ နှစ်ကြောင်းစ ဝင်ရေးတာ ရှိတယ် - တစ်ချို့လည်း တကယ်ကို အားစိုက်ပြီး အပင်ပန်းခံ ရေးပေးနေတာတွေ ရှိတယ် - စသဖြင့် ဘယ်လိုစာမျိုးပဲ ရေးသည်ဖြစ်စေ အဲ့ဒီ့ မိသားစုဝင်တစ်ယောက် ရေးလိုက်တဲ့ အကြောင်းအရာက တစ်ခြားလူတစ်ယောက်အတွက် အကျိုးရှိစေသလား - အများစုအတွက် အကျိုးဖြစ်စေသလား ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့က Reputation ကိုကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်ပါတယ် - ပြောရရင် သူရေးတဲ့ ပို့စ်တွေ - Threads တွေ အတွက် လူအားလုံးက ကောင်းမကောင်း ဝိုင်းပြီး အတည်ပြုပေးကြတဲ့ သဘောပေါ့ - မဲပေးတဲ့ သဘောမျိုးလို့လည်း ပြောလို့ ရတယ်။ အဲ့တော့ ဖိုရမ်မှာ တစ်ယောက်ယောက်ရေးတဲ့ အကြောင်းအရာကို ဖတ်လိုက်ရလို့ စိတ်ထဲမှာ သဘောကျတယ် - သူ့ရေးသားချက်ကို သဘောတူတယ် - လက်ခံတယ် - အများအတွက် အကျိုးရှိတယ်လို့ ယူဆရင် သက်ဆိုင်ရာ ပို့စ်ရဲ့ ဘယ်ဘက်အောက်ထောင့်မှာ ချိန်ခွင်ပုံလေးနဲ့ Add to ....'s Reputation. ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ အဲ့တာလေးကို ကလစ်ပေးပါ - ဒါဆို အောက်မှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း box တစ်ခု ကျလာပြီး ဒီပို့စ်နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ကိုယ့်ထင်မြင်ချက်ကို Reputation ပေးနိုင်ပါပြီ -
တစ်ခုရှိတာက ဘယ်သူ ဘာပေးပေး - ကောင်းတာပေးသည် ဖြစ်စေ ဆိုးတာ ပေးသည် ဖြစ်စေ - Reputation အပေးခံရသူက ဘယ်သူ ဘာပေးတယ်ဆိုတာ မသိနိုင်ပါဘူး - ကိုယ်ရေးတဲ့ပို့စ် ကောင်းလား မကောင်းဘူးလား ဆိုတာ ကိုယ့်ရှေ့မှာ မဲပုံး တစ်ပုံးချထားပြီး လူတိုင်းက မဲလိပ်ထဲမှာ ကောင်းတယ်လို့ ထင်ရင် "ကောင်း" - မကောင်းဘူးလို့ ထင်ရင် "မကောင်း" ဆိုပြီး သူတို့ဘာသာ စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်း မဲပေးတဲ့သဘောပါပဲ - Reputation ကောင်းတယ် မကောင်းဘူး အပေးခံရတာ များလာတဲ့ အပေါ်မူတည်ပြီး အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း User is on distinguished road. အစရှိသဖြင့် Title တွေလည်း ပြောင်းသွားတယ် - အဲ့ဒီ့စာကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း Profile က Reputation icon ပေါ်မှာ ထောက်လိုက်ရင် မြင်နိုင်ပါတယ်။
User is on distinguished road. ဆိုတဲ့ Title ဟာ ဖိုရမ်စဝင်ခါစ မိသားစုဝင်တိုင်း အဲ့ဒီ့ Title ကို ရပါတယ် - ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့လည်း ဘာကြောင့် အဲ့ဒီ Title ပဲ ဖြစ်နေလည်း ဆိုတော့ မိသားစုဝင်တော်တော်များများ ဒီ Reputation ပေးတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သဘောမပေါက်ကြလို့ပါ - အဲ့တော့ ကျွန်တော်ဆို ပို့စ် ၁၀၀၀ ကျော်ရေးပြီးပေမယ့် ခုချိန်ထိ Reputation ၂၀ ပဲ ရသေးတယ် Reputation အကောင်းအဆိုး အပေးခံရတာ များလာတာနဲ့ အမျှ အောက်ဖော်ပြပါ Title အသီးသီးကို ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ ထိပ်ဆုံးက အမြင့်ဆုံးပါ -
User is onadistinguished road 10 ( Users အသစ်တိုင်း ဒီ level ကနေ စပါတယ်။ )
ကိုယ်ရေးတဲ့ ပို့စ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သဘောမကျဘူးလို့ Reputation အပေးခံရတာများလေ Title ကလည်း တဖြေးဖြေး ဆိုးလေပါပဲ - ကောင်းတာရေးမယ် အကျိုးပြုတာလုပ်မယ်ဆိုရင် လူအများရဲ့ ထောက်ခံမှုကို ရပြီး Reputation + ရပါမယ် - ဒီလိုဆို Title ကလည်း တဖြေးဖြေး ကောင်းသထက်ကောင်းတဲ့ ဘက်ကို ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့် Reputation ဘယ်လောက်ရနေပြီလဲ ဆိုတာ UserCP အောက်မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ရှိနေရင် ခုလို မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
ဘယ်သူမှ Reputation ပေးမထားရင် ဘာမှ မြင်ရဦးမှာ မဟုတ်ပါဘူး - အဲ့တာကြောင့် ဒီနေ့ကစပြီး မိသားစုဝင်များကို အကြံပြုချင်တာ အားလုံး တက်ညီလက်ညီနဲ့ ပို့စ်တွေကို ဖတ်ကြည့်ပြီးရင် မိမိရဲ့ ထင်မြင်ချက် Reputation လေးတွေ ပေးပေးကြပါ - ဒါဟာ Thanks ပေးတာထက် သဘောတရား ပိုလေးနက်သလို ဖိုရမ်တစ်ခုမှာ ရပ်တည်နေတဲ့ ပံ့ပိုးကူညီသူတွေကိုလည်း အားပေးရာရောက်ပါတယ်။ တစ်ဖက်လှည့်နဲ့ ပြောရရင် ဖိုရမ်ကို ပျက်စီးအောင် ဖျက်ဆီးနေတဲ့ ကဖျက်ရဖျက် သမားတွေကိုလည်း သူတို့လုပ်ရပ်အတွက် အသိပေးရာရောက်ပြီးသား ဖြစ်သွားပါတယ်။ အားလုံးဝိုင်းဝန်းကူညီကြပါ။ ဒီအကြောင်းကိုပဲ အင်္ဂလိပ်လို အကျယ်ဖတ်ချင်ရင် ဒီနေရာမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
( မှတ်ချက် - ဒီအကြောင်းက ကိုဘဘကြီး မေးထားလို့ စရေးလိုက်တာ - နောက်တော့ သူက မေးထားတာကို ပြန်ဖျက်သွားတယ် - အဲ့တာနဲ့ အားလုံးလည်း သိရအောင် ဒီ မသိမဖြစ်ကဏ္ဍမှာ ထည့်ထားလိုက်ပါတယ်။ )
Last edited by KznT; 25-04-2011 at 02:08 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 63 ဦးတို့မှ KznT အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, ကိုခိုင်ကြီး, ခင်မျိုးစစ်, ချင်းလေး, ချစ်သမီး, ချမ်းမင်း၈၁, ငပြုံး, စွမ်းကမ္ဘာ, စွမ်းထက်မောင်, စနိုးလေး, ဆိုင်နင်ဂျူး, တာတာ, ဒီဝန်းအိမ်, ဒဿဂီရိ, ဘဘကြီး, မိုးတိန်, ယွန်းယွန်း, ရဲရဲလေး, ရှင်းသန့်, သင်းသင်းဟန်, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, ဦးလေးကြီး, ခေါက်ရောင်းသား, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, ဇော်ရဲပိုင်, တောဂေါ်လီ, နေမင်းမောင်, မေဦးမွန်, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, မောင်အောင်ဟိန်းအေး, ငြိမ်းချမ်း, မြင့်မိုရ်, amaung344, apri, arkaraung, AZM, blackNwhite, bonge, daya, Empathlover, g00gle, goldstar, htoo war, htun30, kaung kin lu, ko lin, kyawminkhoung, ma mee, mgwinhlaing, MilkyWay, minlatt, minthike, minthumon, moekabyar, phoetharlay, PyaitSone, runner.zaw, thura.it, tu tu, yelinoo, zin min aung, zo
26-05-2011, 10:03 PM
Youtube Clips များထည့်သွင်းဖော်ပြခြင်း
Youtube Clips တွေ ထည့်သွင်းဖော်ပြတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဖိုရမ်မှာ ရေးထားပြီးသား ရှိပေမယ့် စုစုစည်းစည်း မဖြစ်တာရယ်ကြောင့် မိသားစုဝင်အသစ်များ နားလည်လွယ်အောင် ကျွန်တော် နောက်တစ်ကြိမ် ရေးသားဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ဖိုရမ်ရောက်စက Youtube သီချင်း မထည့်တတ်လို့ ရွာလည်ခဲ့ဖူးတယ်။ Youtube သီချင်းတွေကို ကိုယ်ရေးနေတဲ့ စာနဲ့အတူ တွဲစပ်ထည့်သွင်း ဖော်ပြချင်တဲ့ အခါ အဆင့် ( ၂ ) ဆင့် လုပ်ဆောင်ရပါတယ်။ အရင်ဆုံး ကျွန်တော်တို့ Youtube က ကိုယ်ထည့်ချင်တဲ့ သီချင်း ( Video clip ) ရှိတဲ့ နေရာကို သွားပါ။ ဥပမာ - ကျွန်တော်က Kina Grannis ရဲ့ Valentine သီချင်းကို ဖော်ပြချက် စာသားနဲ့ အတူ ထည့်ချင်တယ် ဆိုပါစို့ - ဒီလိုဆို သူ့ရှိရာ နေရာကို အရင်သွားပြီး ဖော်ပြပါ link နောက်က http://www.youtube.com/watch?v=840NbiFF1zM သီချင်းရဲ့ code နံပါတ်ကို ယူရပါတယ်။ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အတိုင်းပါ။
youtube မှာ တင်ထားသမျှ video clips တွေတိုင်းမှာ အဲ့ဒီ့ နံပါတ်က video clip တစ်ခုချင်းစီတိုင်းအတွက် သူ့နံပါတ်နဲ့ သူ ရှိပါတယ်။ အဲ့တာကို ယူပြီးသွားရင် အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း video clip အတွက် ကိုယ်ထားချင်တဲ့ နေရာမှာ cursor ချပြီး Text editor က Youtube button လေးကို နှိပ်ပါ။
ဒီလိုဆို [youtube][/youtube] ဆိုပြီး ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီ့ [youtube][/youtube] ဆိုတာနှစ်ခုရဲ့ ကြားထဲမှာ ခုနက မှတ်ထားတဲ့ value ကို ထည့်ပေးလိုက်ပါ။
ပြီးရင် နမူနာ ကြည့်ကြည့်ပါ။ သဘောကျရင် တင်လို့ရပါပြီ။
Last edited by KznT; 30-05-2011 at 10:14 PM..
$ညိုမင်းလွင်$, ချင်းလေး, ချစ်သမီး, စွမ်းကမ္ဘာ, မိုးတိန်, သင်းသင်းဟန်, သန့်ဇင်ဌေး, ခေါက်ရောင်းသား, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, ဇေကြီး, နေမင်းမောင်, မေဦးမွန်, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, မြင့်မိုရ်, apri, arkaraung, AZM, bagothar85, blackNwhite, bonge, Emc Arkar, g00gle, goldstar, htun30, kaung kin lu, ko myo, kyawminkhoung, mgwinhlaing, minlatt, minthike, minthumon, mjkomg012@gmail.com, phoetharlay, tu tu, zo
ပြန်စာ - အခြေခံ Text design များ ပြောင်းလဲခြင်း
မိမိရေးထားတဲ့ စာတွေရေးပြီး ဖျက်ချင်ရင် edit လုပ်ပြီးဖျက်လို့ရပါတယ်
တကယ်လို့ ကိုယ်ဖျက်ထားတာကို အခြားသူများ နောက်တစ်ကြိမ် လာဖတ်လို့ သိစေချင်ရင်
အတိုင်းလုပ်ပေးရင် အောက်ကအတိုင်း မြင်ရပါမယ်...
အောက်ပါအသင်းဝင် 33 ဦးတို့မှ minthike အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, ချစ်သမီး, စွမ်းကမ္ဘာ, တာတာ, မိုးတိန်, ယွန်းယွန်း, ဝင်းကျော်ဦး, သင်းသင်းဟန်, ခေါက်ရောင်းသား, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, နေမင်းမောင်, မေဦးမွန်, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, apri, Aung Aung, AZM, bagothar85, bonge, g00gle, goldstar, htun30, kaung kin lu, kyawminkhoung, KznT, mgwinhlaing, minthumon, mjkomg012@gmail.com, pannuko, phoetharlay, PyaitSone, tu tu, zo
မေးမြန်းချက် မေးခွန်းပေါင်း ( ၉၀ ) ခုနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ မြန်မာမိသားစုဖိုရမ် အသုံးပြုနည်းကို ဒီနေ့ အချောသတ်ပါပြီ။ တတ်အားသရွေ့ ပါဝင်ကူညီ အားဖြည့်ရေးသားခဲ့ကြသူများ အားလုံး ကျေးဇူးအထူးပါ။
ကျွန်တော်တာဝန် ယူထားတဲ့ တစ်ချို့အပိုင်းတွေထဲက ရေးဖို့ ကျန်နေတဲ့ အပိုင်းတွေကို အားတဲ့ / စိတ်ပါတဲ့ နေ့လေး နှစ်ခုစ သုံးခုစ လှည့်လှည့် ရေးနေရာကနေ နောက်ဆုံးရေးဖို့ မေးခွန်း ( ၈ ) ခုလောက်ကျန်တော့မှ တော်ယုံနဲ့ လှည့်မရေးဖြစ်တော့ဘူး။ မေးခွန်း ( ၈ ) ခုရေးဖို့ တစ်ခုချင်းစီ ပြန်လိုက်စစ်တော့ အားလုံးကို ခေါင်းစဉ်ခွဲ တစ်ခုတည်းအောက်မှာပဲ ပေါင်းရေးလို့ ရတာနဲ့ မေးခွန်း ( ၈ ) ခုလုံးကို ပြန်ဖျက်ပြီး ခေါင်းစဉ် တစ်ခုတည်း အောက်မှာ ပေါင်းစုရေးသား လိုက်ပါတယ်။
မိသားစုဝင် အဟောင်းတွေ အတွက်တော့ ဒီအကြောင်းအရာ အားလုံး နားလည်ပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ မိသားစုဝင် အသစ်များအတွက် နားလည်နိုင်စေဖို့က ဒီရွေးချယ်မှုများပြင်ရန် ဆိုတဲ့ နေရာဟာ ဖိုရမ်က Default အနေနဲ့ သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ Options တွေကို မိသားစုဝင် တစ်ဦးချင်းစီအလိုက် မိမိတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်လိုလားချက်ကို လိုက်ပြီး ပြင်ဆင်ယူနိုင်စေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့အောက်မှာ ဘာတွေကို ပြင်ဆင်နိုင်မလဲဆိုရင် -
ကိုယ့်ဆီကို ဖိုရမ်နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အီးမေးလ်တွေ မကြာခဏ ရောက်လာတာမျိုး မနှစ်သက်တဲ့အခါ ပြင်ဆင်နိုင်မယ်။
ဖိုရမ်မှာရှိနေတဲ့ အသင်းဝင်တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး စာချွန်လွှာ ပို့တဲ့စနစ်တွေကို မနှစ်သက်ရင် ရပ်တန့်ထားနိုင်မယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ရေးဖိုင်ကို ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုသူတွေဆီက ဝေဖန်ချက်တွေ လက်မခံချင်တာ ရှိရင် ပြင်ဆင်နိုင်မယ်။
ရေးသားချက်အပိုင်းတွေမှာ ထိုးမြဲလက်မှတ်တို့ သရုပ်ပြပုံငယ်တို့ မပြချင်ရင် ဖျောက်ထားနိုင်မယ်။
ဆွေးနွေးချက် ဖော်ပြချက် ပုံစံတွေ ပြင်ယူနိုင်မယ်။
အရင်က စာမျက်နှာတစ်ခုတည်းမှာ ကိုယ်မြင်ရတဲ့ ပို့စ်အရေအတွက်တွေ နည်းနေတယ်လို့ ထင်ရင် တိုးယူနိုင်သလို အင်တာနက် မကောင်းလို့ loading time နည်းအောင် ပို့စ်အရေအတွက် လျော့ပြစေချင်ရင်လည်း ပြင်နိုင်မယ်။
ဆွေးနွေးချက်တွေကို သက်တမ်းအလိုက် ပြစေချင်ရင်လည်း ပြင်ဆင်နိုင်မယ်။
ဒေသစံတော်ချိန်တွေ ဖိုရမ်စတိုင်လ် ဆိုတာတွေကိုလည်း ပြင်ဆင်နိုင်ဦးမယ်။
အားလုံးကို တစ်နေရာတည်းကနေ ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ ရွေးချယ်မှုများ ပြင်ရန် ဆိုတဲ့ တည်နေရာကို မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်ရဲ့ Control Panel အောက်က -
အောက်ဖော်ပြပါ နေရာမှာ တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင် 37 ဦးတို့မှ KznT အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, ကိုစံငြိမ်း, ချစ်သမီး, စွမ်းကမ္ဘာ, ဆန်းမောင်, တာတာ, မိုးတိန်, သင်းသင်းဟန်, ခေါက်ရောင်းသား, မေဦးမွန်, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, မောင်ပေါက်, ငြိမ်းချမ်း, မြင့်မိုရ်, apri, AZM, azp09, bagothar85, bonge, daya, g00gle, goldstar, hellboy, htun30, kaung kin lu, ma mee, mgwinhlaing, minlatt, minthike, ninimar, phoetharlay, putty, PyaitSone, pyuepyue, tu tu, zo